high-ပါဝါ LED Project မှမီးအိမ် China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Rotate ကို LED Project မှမီးအိမ်,high-ပါဝါ LED Project မှမီးအိမ်,ရေစိုခံနဲ့ LED Project မှမီးအိမ်
Home > ထုတ်ကုန်များ > အဆောက်အဦး Lighting စီးရီး > LED Project မှမီးအိမ် > high-ပါဝါ LED Project မှမီးအိမ်
LED စီမံကိန်း Lamps ကိုလည်း microchip ထိန်းချုပ်မှုတို့က lights.LED စီမံကိန်းကိုဆီမီးခွက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလက်ရှိထုတ်ကုန်နှစ်မျိုး, reactive ပါဝါ chip ကိုပေါင်းစပ်အမျိုးအစား, တဦးတည်းက high-ပါဝါချစ်ပ်နှင့်အတူ performance ကိုနောက်ထပ်ကြင်နာတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည်, မြင့်သောဟောင်းတစ်ခုတည်းကြီးမား LED ဟုခေါ်ကြသည် ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ -power မြင့်မားပါဝါအောင်မြင်ရန်နိုင်သည့်သွန်းအလင်း irradiation ၏သေးငယ်တဲ့အကွာအဝေးများအတွက်သင့်လျော်သော, ရှည်လျားသောအကွာအဝေးကျော်ကြီးမားသောသွန်းအလင်းဆောင်ရွက်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဦးဆောင် Tile slot မီးအိမ်, Led Project မှမီးအိမ်, Led ညမီးအိမ်, Led Mood မီးအိမ်, လူမီနီယမ်အလွိုင်း Lighting ဝင်ရိုးစွန်း, အပေါ့ပါးဆုံးလူမီနီယမ်အလွိုင်း, လူမီနီယမ်အလွိုင်း Torchlight, Lightweight လူမီနီယမ်အလွိုင်း, နယူးကုန်ပစ္စည်းများ Lighting စီးရီး, လူမီနီယမ်အလွိုင်း Lighting ဝင်ရိုးစွန်း Spinning Spinning ။
မြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသေ-casting လူမီနီယံပစ္စည်းများ, ငြိမ် Anti-အိုမင်းပေါ်လာ။
Electrospray ကုသမှု Self-သန့်ရှင်းရေး, ဆန့်ကျင် - Glass ကိုဖုံး corrosive.toughened မြင့်မားအစှမျးသတ်တိနှငျ့သက်ရောက်မှု resistance.Lamps နှင့်မီးအိမ်အဖြူရောင်အလင်းသို့မဟုတ်မိုနိုခရုမ် RGB ကိုက်ညီနိုငျသညျ, ထိုအလင်းရောင်သက်ရောက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ပါသည်, color.Pure, အပြောင်းအလဲကို function ကို powerful.The မီးခွက်ဖြစ်ပါသည် ပလီကေးရှင်း Serial နှင့် available.Multiple ရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။
1. ဖက်ရှင်, ခေတ်သစ်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်း, မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်ကိုလည်းပတ်ဝန်းကျင်စုံလင်သောပြည်ထောင်စုနှင့်အတူအနုပညာအလုပ်ဖြစ်လာပါစေ။
2. luminaire ၏အဓိကပစ္စည်းမြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသေ-casting လူမီနီယံပစ္စည်းကို လုပ်. , မျက်နှာပြင် Anti-အိုမင်း electrostatic ဖြစ်စဉ်ကို, ကိုယ်ပိုင်သန့်ရှင်းရေးနဲ့ anti-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးပက်ဖြန်းသည်။
မြင့်မားသောအစှမျးသတ်တိနှငျ့သက်ရောက်မှုခုခံနှင့်အတူ 3. စနစ်ဖြစ်ပြီးဖန်အဖုံး။
4. ဆီမီးခွက်အဖြူသို့မဟုတ် monochromatic RGB, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အလင်းရောင်သက်ရောက်မှု, အရောင်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်, အစွမ်းထက်ပြောင်းလဲမှု configured နိုင်ပါသည်။
5. အဆိုပါဆီမီးခွက်ခန္ဓာကိုယ်မြင့်မားသော၏ဖန်ဆင်းထားသည် - ကိုနှင်ထုတ်လူမီနီယံပစ္စည်းများ, ပက်ဖြန်းမျက်နှာပြင် electrostatic သေဆုံး
6. အဆိုပါထူးခြားသော Rotate fixed မူလီ 360 ဒီဂရီလှည့်နိုင်ပါသည်။
7. အလင်းအရင်းအမြစ်ပေါင်းစပ် optical အစီအစဉ် LED, 1W တစ်ခုတည်း RGB အလင်းအရင်းအမြစ်ချမှတ်, နှင့်ရောစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု သာ. ကောင်း၏။
8. အလင်း DMX512, အလင်းရောင်သက်ရောက်မှုအပြောင်းအလဲများတစ်အစွမ်းထက် function ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဆီမီးခွက်စီးရီး, ပါဝါ, 18W-36W အကြားနိုင်ပါတယ် applications များအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
1. ပင်မပစ္စည်း: အမြင့် - ဖိအားကိုနှင်ထုတ်လူမီနီယံ, 92% မွငျ့မား - အလင်းသံမဏိမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ဖန်
2.Surface ကုသမှု: ခရမ်းလွန် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်း
3.The အလင်းခန္ဓာကိုယ်အရောင်: အမှောင်မီးခိုးရောင်
4.Safeguard လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ: ရေစိုခံ compacted silica gel ဟာလက်စွပ်;
6.Control မုဒ်: CC ကို / DMX512
အပူချိန် 7.Operating: -25 ℃ ~ 50 ℃
9.temperature: အနီရောင် / စိမ်းလန်း / အဝါရောင် / Amber / မိုးပြီးမှ / အက်ဆစ်အပြာ / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K;
10Light ဖြန့်ဖြူး device ကို: ရောင်ပြန်ဆီမီးခွက်ခွက်ကိုစီးရီး:6°; Optical မှန်ဘီလူးစီးရီး: 8 ° / 15 ° / 25 ° / 45 ° / 10 × 30 ရက်° / 10 × 60 ° / 20 × 40 °;
11.Working ဗို့: DC24V
12.Way တပ်ဆင်ရန်: လူပျိုဦးချိန်ညှိထောင့် backet
13.Rated ပါဝါ: 18W / 24W / 36W
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏ 14.Level: IP65
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : အဆောက်အဦး Lighting စီးရီး > LED Project မှမီးအိမ်
မြို့ပြလမ်းမ Lighting လမ်းအလင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2-3m ဥယျာဉ်ဆီမီးခွက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Rotate ကို LED Project မှမီးအိမ် high-ပါဝါ LED Project မှမီးအိမ် ရေစိုခံနဲ့ LED Project မှမီးအိမ် ရှုခင်းအမြင့်ရွက်တိုင်မီးအိမ် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နေရောင်ခြည်လမ်းအလင်း